Suudaanta Koonfureed ayaa dalka Sudan intii kale ka go’day sanadkii 2011kii ka dib heshiis nabadeed oo soo afjaray dagaalo tobaneeyo sanadood socday. Labada waddan ayaa muran joogta ah ku jiray ilaa xiligii kala go’a. Arrintan ayaa keentay in sanadkii hore Sudanta Koonfureed ay joojiso saladii dhinacooda ka imanaysay, saliidaas oo labada dalba u ahayd il uu dakhli wanaagsani kasoo galo. Heshiisyada dhinaca saliidda ayaa ka mid noqon doona heshiisyada hadda jira ee dhaqan glainta sugaya.
Mr. Mbeki ayaa sheegay in heshiisyada saliidda aan iyaga si gaar ah looga doodin.